Gadzira Yako Yekurega Kuronga - 802Quits
Vermonters NDINODA KUREGA Ita Yako Yosiya Kuronga
GADZIRA YAKO KUTI URIRE CHIRONGWA
Mikana yako yekubudirira kurega fodya iri nani kana iwe uine yakagadziriswa nzira yekurega.
Ndeipi nzira yakanakisa yekurega kuputa, kufema kana zvimwe zvigadzirwa zvefodya? Iko hakuna imwechete nzira chaiyo yekurega. Kana iwe wakamboedza imwe nzira munguva yakapfuura uye ikasashanda, funga kuyedza imwe. Tinokufambisa nenzira dzekuvaka uye kushandisa yako yega kusiya chirongwa.
KUSVIRA KUNOTANGA ZVINO.
Kurega kwakaoma, asi
inowedzera kubudirira kwako. Zadzisa matanho matanhatu akareruka kuti uwane yako yakasarudzika kurega chirongwa. Gadzira yako yega yekurega chirongwa nekutevera matanho ari pazasi. Unogona kudhawunirodha, kudhinda uye kuwedzera chirongwa chako chekurega kumarenda ako epamhepo.
GADZIRA YAKO YEMAHARA DATE
Tanga nekuisa zuva rako rekurega
Sarudza zuva mukati memavhiki maviri anotevera. Izvi zvinokupa iwe yakakwana nguva yekugadzirira.
YANGU YEMAHARA DATE
Nicotine yabuda musystem yako.
Zviratidzo zvekudzima zvemuviri zvinopera.
Kushuva kunobva mukushushikana uye kwetsika zvinokonzeresa kunogona kuenderera.
Sarudza zvikonzero zvako zvekurega
Pane zvikonzero zvakawanda zvekurega kuputa fodya, zvemidzanga zvemagetsi (e-fodya) kana kushandisa mamwe marudzi efodya. Dzese dzakanaka. Sarudza zvikonzero zvako. Ivo vachawedzerwa kune yako yakagadziriswa "Yangu Kusiya Chirongwa."
Kuziva kwako kukonzeresa kunobatsira iwe kugara mukutonga. Paunotanga kurega, ungangoda kudzivirira zvachose zvaunokonzeresa. Mushure mekugara usina fodya kwechinguva, unogona kuwana dzimwe nzira dzekubata yako zvinokonzeresa. Sarudza zvinokonzeresa zvinoita kuti ushandise fodya. Ivo vanozowedzerwa kune yako yakasarudzika "Yangu Kusiya Chirongwa."
Kutonhorerwa mushure mekurwa
Kutora zororo rebasa
Mushure mekuita bonde
Kuenda kune chiitiko chemagariro
Kuona mumwe munhu achisvira
GADZIRIRA KUTI URWISE ZVINODA
Shungu dzinongotora maminetsi mashoma-asi iwo maminetsi anogona kunge achikurira. Sarudza mhando dzezvishuwo zvaunowanzove nazvo. Iwo matipi ekurova izvi zvishuwo zvichawedzerwa kune yako yakagadzirirwa "Yangu Kusiya Chirongwa."
Iwe unofanirwa here kuchengeta maoko ako nemuromo zvakabatikana?
Bata uswa muruoko rwako uye ufeme naro.
Tamba nemari kana paperclip kuti maoko ako arambe akabatikana.
Iwe unoshandisa fodya kudzikisira kushushikana kana kugadzirisa manzwiro ako?
Dzidzira kufema kwakadzika kudzikama kana kuita mamwe maphuphup kufuridza mweya.
Tendeukira kushamwari, mhuri, uye vanachipangamazano kana iwe uchida mumwe munhu wekutaura naye.
Iwe unonetseka here kugara wakabatikana uye uchibata pfungwa dzako?
Gadzira runyorwa rwemabasa iwe aunogona kuita kana kuchiva kuchirova. Urongwa urwu hunogona kusanganisira mabasa epamba, kupindura maemail, kumhanya mhanya, kana kuronga chirongwa chako chezuva rinotevera.
Iwe unogumbuka uye unonetseka usina midzanga here?
Nicotine replacement therapy (NRT), senge zvigamba, chingamu, kana lozenges, zvinobatsira kubvisa zviratidzo zvekubvisa. Taura nachiremba wako kuti uone kuti ndeipi mhando yeNRT yakakunakira iwe.
Unoshandisa fodya kukurudzira simba here?
Kuti simba rako rirambe rakatsiga, gara uchirovedza muviri uye utore zvekudya zvine utano muswere wese wezuva.
Ita shuwa kuti iwe uri kuwana yakawanda yekurara usiku kuti ikubatsire iwe kubva mukunzwa kunonoka mukati mezuva.
Unoshandisa fodya nekuti inonakidza uye inozorodza here?
Zvibate kune mumwe mufaro. Teerera nziyo dzako dzaunofarira, ronga husiku hwemufirimu neshamwari kana chengeta fodya yako, e-mudzanga, kutsenga fodya kana mari yefodya kuti uwane chinwiwa kana wasvika padanho risina fodya.
Bvisa ZVIRANGARIDZO ZVETOBACCO
Kuona zviyeuchidzo zvefodya zvinoita kuti zviome kugara usina fodya. Bvisa chero zviyeuchidzo mumba mako, mumotokari uye kunzvimbo yebasa zuva rako rekurega risati rasvika. Pazasi pane runyorwa rwezviyeuchidzo zvakajairika uye maitiro ekuita nazvo. Iyi runyorwa ichawedzerwa kune yako yakagadziriswa "Yangu Kusiya Chirongwa."
Shamba mbatya dzako, kunyanya bhachi raunopfeka kuti utore maputi
Chenesa mota yako.
Bvisa machisi, zvidhori zvemadota, uye zvidhoma zvefodya zvinogona kunge zviri kunze kwemusha wako.
Isa zvishuwo zvekurwa-semashanga, chingamu, kana runyorwa rwemabasa epamba-munzvimbo dzawakachengetera midzanga yako, zvidhori zvemadota, machisi nemagetsi.
BVA NENZIRA YEKUWEDZERA
802quits.org ine maturusi mazhinji ekuti kurega kureruka. Wongorora izvi zviwanikwa uye sarudza izvo zvinokufadza. Ivo vanozowedzerwa kune yako yakasarudzika "Yangu Kusiya Chirongwa" neruzivo rwekuti ungashandise sei.
Fonera 1-800-BVISA-IZVOZVI zvemahara zvakagadzirirwa kurega rubatsiro neako-on-one coaching. Quitline Makochi anowanikwa 24/7, nerumwe rutsigiro kuburikidza neemail uye zvinyorwa. Inosanganisira emahara zvigamba, chingamu uye lozenges.
Tsvaga rubatsiro kurega neVermont Regedza Partners diki vezera rutsigiro. Misangano yevhiki nevhiki ye4 kusvika kumavhiki matanhatu inowanikwa munzvimbo dzese. Inosanganisira emahara zvigamba, chingamu uye lozenges.
Pa802quits.org, rega wega nerubatsiro kubva pamhepo zvishandiso uye zviwanikwa senge mamabhodhi emashoko. Inosanganisira emahara zvigamba, chingamu uye lozenges.
Kushandisa mishonga uye / kana nicotine replacement therapy (NRT) inogona kuvandudza mikana yako yekurega zvachose. Taura nemupi wako wezvehutano kuti uone kuti ndezvipi sarudzo zvakakunakira iwe.
Udza shamwari uye mhuri.
Kurega fodya kuri nyore kana iwe uine rutsigiro kubva kune vako vaunoda.
Zvemukati zvakagadziriswa nemvumo kubva kuNational Cancer Institute uye Smokefree.gov